करीब एक वर्षकै उच्च विन्दुमा नेप्से, १३३४.०५ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से अन्त्यमा १३२१ विन्दुमा बन्द, सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी कुन ? | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण करीब एक वर्षकै उच्च विन्दुमा नेप्से, १३३४.०५ विन्दुसम्म पुगेको नेप्से अन्त्यमा १३२१ विन्दुमा बन्द, सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी कुन ?
on: May 15, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
जेठ १, काठमाडौं (अस) । बुधवार नेप्से ५ दशमलव ५५ अंकले बढेर १ हजार ३२१ विन्दुमा बन्द भएको छ । १ हजार ३१६ दशमलव ९७ विन्दुबाट शुरु भएको परिसूचक १ हजार ३३४ दशमलव ०५ विन्दुसम्म पुगेको थियो । करीब एक वर्षपछि नेप्से सो विन्दुमा पुगेको हो । २०७५ साल जेठ १४ गते हजार ३३६ दशमलव ३९ विन्दुमा पुगेको नेप्से जेठ १ गते सोही विन्दुमा पुग्न खोजेको थियो । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि करीब सार्वजानिक हुने अन्तिम तिर पुगिसकेको छ ।
अधिंकाश कम्पनीहरुले विवरण प्रकाशित गरिसकेका छन् । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था हेरिसकेपछि नाफा कमाएका र वित्तीय अवस्था रााम्रो भएका कम्पनीहरुमा लगानी बढाएको अनुमान गरिएको छ । जसले बजार बढ्न मद्दत पुगेको हो ।
कारोबार भएका १२ समूहको परिसूचकमा ६ समूहको परिसचूक बढेको छ भने छ समूहको परिसूचक घटेको छ । व्यापार समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढेको छ । सो समूहमा कारोबार हुने विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि समूहको परिसूचक बढेको हो । विकास बैंकको १ दशमलव ६६ र ‘अन्य’ समूहको १ दशमलव शून्य ९ प्रतिशतले बढेको छ ।
बुधवार रू. १ अर्ब ३३ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । अघिल्लो दिनको तुलनामा कारोबार रकम २८ दशमलव २५ प्रतिशत बढेको छ । सेन्सेटिभ इण्डेक्स २ दशमलव ५१ अंकले बढेर २ सय ८२ दशमलव २५ विन्दुमा पुगेको छ ।
विशाल बजारको शेयर मूल्य बढ्दा हिमालयन डिष्टिलरीको घट्यो
बुधवार नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेण्ट बैंक र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य करीब ८ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल कम्युनीटीको शेयर मूल्य ७ दशमलव ९७ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १४९ पुगेको छ । कम्पनीको शेयर मूल्य रू. ११ ले बढेको छ । दोस्रोमा विशाल बजार कम्पनीको सर्किट लागेको शेयर अन्त्यमा ७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ । कम्पनीको शेयर लामो समयपछि कारोबार भएको हो । कम्पनीको १२ पटकको व्यापारमा ३२५ कित्ता शेयरको रू. ५ लाख ६१ हजार बराबरको कारोबार भएको छ । कम्पनीको १० कित्तादेखि ५० कित्तासम्म कारोबार भएर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ७३० पुगेको छ । हिमालयन डिष्टिलरी लिमिटेडको शेयर मूल्य ६ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. १ हजार ८८३ कायम भएको छ ।
लाभांश दिन पाउने भएपछि एनसीसीको सर्वाधिक कारोबार
वित्तीय विवरणमा नाफा कमाएर प्रगति गरेपछि एनसीसी बैंकले लाभांश दिन पाउने भएको छ । सोही कारण मंगलवार बैंकको सर्वाधिक रू. १४ करोड ८२ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयर मूल्य रू. २५९ रहेको छ । दोस्रोमा नेपाल बैंकको रू. १३ करोड२४१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । कारोबार भएका १७२ कम्पनीमा ६८ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ८३ कम्पनीको घटेको छ । साथै, २१ कम्पनीको स्थिर रहेको छ ।